एमसीसीलाई संसदमै लैजान दिनु हुँदैन : सीपी गजुरेल :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
एमसीसीलाई संसदमै लैजान दिनु हुँदैन : सीपी गजुरेल
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एमसीसी संसदमा पुगेपछि पारित हुने सम्भावना रहेकाले संसदमै लैजान दिन नहुने बताएका छन्।
आइतबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै अध्यक्ष गजुरेलले एमसीसी संसदमै लैजान दिन नहुने बताएका हुन्।
उनले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामार्फत् दिने भनिएको रकम भन्दाबढी रकम एनसेलको कर उठाउँदा जम्मा हुने भन्दै रकमभन्दा पनि परिणाम घातक रहेको उल्लेख गरे। अध्यक्ष गजुरेलले अमेरिका नेपालमा आइसकेपछि पछि नहट्ने र रणनीतिक महत्वका ठाउँहरुमा आफ्नो अखडा खडा गर्ने भएकोले एमसीसी पास गर्न नहुने जिकिर गरे।
‘एनसेलसँग बाँकी रहेको कर उठायो भने त्यसको डेढी रकम त त्यहीँ हुँदोरहेछ। ७५ अर्ब बाँकी छ भनेर चर्चा भइरहेको छ। त्यो रकम ठूलो होइन, तर त्यसको परिणाम कति घातक छ? किनभने यहाँ एमसीसीको बहानामा अमेरिका नेपाल भित्र पसिसकेपछि यहाँबाट पछि हट्ने छैन’, अध्यक्ष गजुरेलले भने।
अध्यक्ष गजुरेलले अगाडि भने, ‘उसले रणनीतिक महत्वका ठाउँहरुमा आफ्नो अखडा खडा गर्नेछ । र चीनसँग आवश्यक पर्दा हिँड्ने तयारी गर्दैछ। मान्छेहरुले यो पनि भन्ने गर्छन्, चीनको लागि तिमीहरुले अमेरिकाको विरोध गरेको? त्यो कुरा होइन, चीनले आफ्नो ढंगले समाधान गर्ला, चीन पनि एउटा शक्ति राष्ट्र हो। उसले अमेरिकासँग कसरी लड्ने भन्ने योजना बनाइसकेको छ। एमसीसी खारेजीको अभियान नेपालकै लागि चलाइएको हो । हामीले यसलाई संसदमा एजेण्डाको रुपमा लैजान दिनु हुँदैन । लग्ने र टेबुल गर्ने बित्तिकै पारित हुनेवाला छ।’
अध्यक्ष गजुरेलले चीनसँग लड्नका लागि अमेरिकाले नेपाललाई अखडा बनाउन एमसीसी सम्झौंताका लागि दबाब दिएकाले आफूहरुले विरोध गर्नु परेको तर्क समेत गरे।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १८, २०७८, ०६:१६:००